Buraannews.com » Umada Soomaaliyeed oo saaran dusha Diyaarad aan Duuliye Run ah Wadin (Daawo Sawir Muujinaya)
Dagalamayaal Al-shabaab ah oo gudaha u galay Xarunta UN-diibibada Muqdisho. Daliban oo ogolaatay wada hadalo toos ah ay la gasho Maraykanka. QM OO SHEEGTAY IN AYSAN HAYNIN XAD BADEEDKA BIYAHA SOMALIA . Hogaanka Booliska G-Bay oo dad badan u soo xir xiray amaan darida Gobolkasi. Tababare Al-shabab ah oo Kenya lagu dilay. SOMALI LINKS
Umada Soomaaliyeed oo saaran dusha Diyaarad aan Duuliye Run ah Wadin (Daawo Sawir Muujinaya)
December 1, 2012 - Written by reporter2 - Edited byameen ali Astaamaha lagu garan karo Siyaasadda dalk kasta iyo geedi socodkeeda waxaa laga tusaale qaataa Hoggaanka uu dalkaas iyo shacabkiisa ay sameystaan iyo tallaboyinka ay had iyo jeer ay qaadaan Madaxda dalkaas oo dhan kasta leh.
Somalia waxey la bur burtey waa caddaalad darro oo salka ku haysa aqoon la’aan, qab , islaweyni iyo ku tiirsanaansho qabiil, qansac , qori iyo qowleysatonimo nuxurkeedu yahay keligeey aan quuto, aan sed buursado, ciddii ila aragtana qabiilkeey ayaan ula kaashanayaa, qoryaheyna ayaan la soo baxeynaa, qas iyo jaho wareer ayaan abuureynaa si aan u sii kordhisano joogitaankeyna iyo ka faa’iideysashada awoodeyna anagoo aan dan haba yaraatee ka laheyn xishood, sharci ilaalin, iyo ixtiraam toona.
Duuliyahaan oo ah Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud ayaa loo doortey inuu shacabka Somaliyed ka saaro dabka iyo dulmiga ay ku soo jirteen dhowr iyo labaatan sano uuna geeyo mel xasiloon , nabdoon oo ka fog halka ay hadda joogaan, waxaase nasiib darro noqotey in duuliyaha uusan ahaynin nin aqoon u leh cilmiga duulista Dayaaradda ee uu ku rarey shacabka iyo dalkaba, hawadana la galey isagoon lahayn awood uu ku geeyo halkii ay saldhigan lahayd siyaasadda dalka.
Ilaa iyo hadda tallabooyinka uu qaadey Madaxweyne Xassan Sheikh waxaad moodaa inuu u qaadey dhanka keli talisnimada, sharci ka fogaanshada iyo isku koobida awoodda Siyaasadeed ee dalka oo dhan isagoo qaadey tallabooyinkaan soo socda:
1) Wuxuu jebiyey Qodobkii awood qeybsiga ee ay Somalidu ku heshiisey oo ahaa 4.5 kana dhigey 5 beelood oo siman isagoo aan soo marsiinin Goloha Baarlamaanka si ay u beddelaan haddii uu Baarlamaanka sidaas isku raaco.
2) Wuxuu soo magacawdey Wasiirro oo ay wada lahaan jireen dano dhaqaale iyo mid xirfadeed oo ay kada tirsanaayeen NGOyo ay dalka ay ku haysteen 20kii sano ee uu dalka ka jiri bur burka iyo ku meel gaarka, taasoo sharciyan ay tahay xad gudub awoodeed iyo iska hor-imaansho dano (Conflic of Interest and abuse of Public power for private interest).
3) Inuu ka soo horjeestey qaabkii lagu heshiiyey oo ahaa Nidaamka Federaaliga ah isagoo yiri waa qaab ku cusub Somalia una baahan inaan lagu deg deign, Wasiirkiisa arrimaha gudahana si cad u yiri Dawladda ayaa u magacaabesa Maamulo ku meel gaar Gobollada Dalka iyagoo ilowsan in nidaamka iyagaba lagu soo doortey uu ahaa Federaalka.
4) Inuu Madaxweynaha yiri Ethiopia kalama baxeyso Ciidankeeda ilaa iyo inta AMISOM ay dalka oo dhan ku soo celineyso Nabad iyadoo arrintaan ay dhalin karta shakki ah goormey baxeysaa iyo qaabkee u baxeysaa ? goormaa AMISOM ay xasilin doontaa dalka oo dhan iyadoo aan haba yaraatee muuqanin qorshe cad oo muujinaaya barnaamijkaas, kana soo baranney taariikhda dalalka ciidamo noocaas ah loo direy oo ilaa iyo hadda ay joogaan iyo danaha Dhaqaale iyo Siyaasadeed ay leeyihiin dalalka ciidamadooda keeney Somalia.
5) Waxaa kale ee uu yiri Somalia waxey ballan qaadeysaa in OLF iyo OLNF aysan saldhig ku yeelanin dalkeeda gudahiisa, looguna duulin Ethiopia, arrintaan waxey Somalia dusha ka saareysaa mas’uuliyad culus oo aysan qaadi Karin maxaa yeeley Xaqiiqda waxa ay tahay in Ethiopia gudaheeda ay ka jiraan Jabhadahaas, waxaana Ethiopia loo banneyey iney soo geli karto Somalia mar kasta oo ay tiraahdo waa leygu soo duuley.
6) Arrinta ugu daran waxey tahay, marka uu Madaxweyne Xassan yiri Ethiopia ayaa inoo dhiseysa Ciidamada Dalka, siin doonto tababar tayeysan oo u suurta gelisa iney hantaan aminga iyo difaaca dalka, wuxuu iloowey maah maahdii ahayd “ Nin Xaaskaaga doonaayo, Gabadheyda aan kuu guuriyo, kaama yeelaayo”.
Arrimahaas kor ku xusan iyo kuwo kale oo badan ayaa waxey tusaale u noqon karaan sida duuliyahaan uu qarka ugu tuuri doono dayaaraddaan oo ay rakaabkeedu yihiin shacabka Masaakiinta ah ee Somalia, haddii aan wax laga qabanin u horseedi karto dalka iyo dadkaba iney ku dhufato Tsunami Siyaasadeed , sharci iyo qaanuun ku tumasho iyo ku Xadgudub awoodaha Hay’adaha kale ee tiirarka u ah Dimoqraadiyadda , dawlad wanaagga , isla xisaabtanka iyo horumarka, hasee yeeshe Mr Xassan Sheikh wuxuu danta dalka iyo dalka ka hormariyey Kursigiisa iyo baahidiisa gaarka ah, taasna qaran laguma hoggaamin karo.
War Deg Deg Ah : Xulalka Hargeysa iyo Hawd oo isugu soo baxay finelka kama dambaysata ah ee koobka lagu kala qaadi doonoJune 18, 2013
Wasiirka Madaxtooyadda Oo ka hadlay Heshiiskii Xukuumadda Iyo Ururkii Xaqsoor wada gaadheenJune 18, 2013
Aqriso Khodbadii Ra’iisal Wasaaraha ee furitaankii Shirkii Waxbarashada: Dib-u Noolaynta Waxbarashada SoomaaliyaJune 18, 2013
Guddiga doorashooyinka Haylaan oo walaac ka muujiyay iscasilaadi Dr Yuusuf XaajiJune 18, 2013
Shir weyne lagu habenayo waxbarashada oo maanta ka furmay MuqdishoJune 18, 2013
War bixin laga soo saaray Koxda Burcad badeeda SomaliaJune 18, 2013
Sarkaalkii ugu sareeyay ee Ururka Raaskamboni oo lagu dhawacay Kismaayo.June 18, 2013
Dowlada Somalia oo been abuur ku tilmaantay in dastuurka wax laga badalay.June 18, 2013